Lumberton, NC: Himilada iyo Ficilka - Relief Musiibo ee Musiibada
Home/updates/Lumberton, NC: Himilo iyo Ficil
Way adag tahay in la rumeeysto in bil ka badan ay horay u soo mareysay tan iyo Hurricane Florence oo daadadku u muuqdo mid aan dhamaaneyn oo roobka haysa woqooyiga Carolina.
Waxaan dib u milicsanaynaa dadaallada gargaarka hoggaamineed ee asaliga ah ee ka socda Lumberton, NC. Dadaal ayaan nasiib u helnay inaan qeyb ka noqono.
Waxa soo socdaa waa uun sawir. Saaxiibtinimada ayaa dhidibada loo taagay iyo dareenka suurta galka ah ee khiyaameeyay quusinta, laakiin waxaan rabnaa inaan bixino sawir ku saabsan baaxadda weyn ee ay dadku ka sameeyeen aaggii hore ee Florence.
Tan iyo markii ay duufaantu dhacday, marka lagu daro badbaadinta ku dhawaad ​​dadka 75 ee biyaha daadadka ah, waxaan si toos ah u siinay wax ka badan 100,000 lbs sahay si toos ah bulshada iyo shaqaalaha beeraha Migrant dhammaan Robeson iyo gobollada ku dhow, waxaan u gudbinay xirmooyinka yareynta waxyeelada, guryaynta 10 guryaha , dib u hagaajinta saqafyada 3 iyo dabaqa oo ay weheliso xarkaha korantada iyo albaab laga soo galo. Waxaan haysanaa oo aan sii wadnaa inaan ka shaqeyno dib-u-hagaajinta caaryada guryaha badan. Hadana waxaan haysanaa meel bakhaar ah oo kiro ah oo aan ku dhisi karno bangi cunto iyo xarun qaybinta sahayda waxaana u dirnay sahay midnimo beelihii ay saameysay Hurricane Michael ee Florida.
Waxaan hadda haysannaa guryo ah 3 oo innaga sugaya inaan bilaabin dayactirka isla markiiba.
Lumbee waxay leedahay taariikh sharaf leh oo hodan ah oo ka dagaallama Klan oo is daryeela. Dadaalladii ugu dambeeyay ee gargaarka waa muujinta ugu dambeysa ee naftooda halganka iyo u hibeynta adduun ka wanaagsan.
Isku soo wada duub.
Maxay ku wadaagaan ereyadan?
Maaha dhacdooyin keliya, waa hawlo deg-deg ah
Waxay hadda dhacayaan
Dhamaanteen waxaan ku jirnaa dhexda
Adduunyo badan baa dhammaaday. Halkan waa meesha farqiga u dhexeeya adduunka iyo dhulku faa'iido leeyahay. Adduunyo badan baa dhammaaday. Anaguna sidoo kale sidaas ayaan yeeli doonnaa.
Sahayda iyo tabarucaada lacageed ayaa hoos u dhacay Lumberton. Waxaan aaminsanahay in tan loo aanayn karo daal saxaafadeed iyo qofkasta oo ku sii socda, laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in dadaallada gurmadka ay waqti qaataan, dib u dhiska nolosha waqti ayey qaadataa baahiina wali waa mid aad u weyn.
Waa inaan ka dhaqaaqnaa bakhaarradeena qadiimiga ahaa ee asalka ahaa, hagaagsana… dhaqaaqa ayaa socda hadda, taasi waa. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaan helno meel cusub oo joogto ah oo loogu talagalay gargaarka iyo abaabulka bulshada. Akhbaarta xun ayaa ah waxaan hoos ugu dhaceynaa shaqaalihii lafaha '3-6' ee markasta oo aan iskudayeyno inaan bakhaar dhan ugu dhaqaaqno ilo yar.
Waxaan haynaa dhowr mashruuc oo muhiim ah oo aan ku shaqeynayno, oo ay kujirto balwaynta guryaha burburay daadadka qoysaska iyo sameynta dayactirka lagama maarmaanka ah. Tani waa mid qaali ah isla markaana u baahan maydad badan oo aan haysanno. Dadku kuma noolaan karaan guryaha caaryada caaryada leh. Waxaa jira carruur iyo odayaal iyo dad leh nidaamyo difaac.
Dhamaan waxa la yiri, waxaan u baahan nahay:
- mutadawiciin, jirro, shaqaale, oo leh wax xirfad ah ama aan lahayn (waxaan kuuheli doonnaa shaqo aad qabato, waxbadan ayaa jirta), laakiin gaar ahaan dadka leh asal kasta oo laxiriira dayactirka guryahaas.
- cuntada, biyaha, nadiifinta & sahayda dhismaha, sahayda carruurta, iwm.
- Lacag, si loogu sii socdo mashaariicahan, nalalka la dhigo, oo la sii hayo
- haddii ay ka sahlan tahay, waxaan helnay dokumeentiyo lowe ah iyo wal-Mart hadiyado, iyo sidoo kale kaararka dukaamada raashinka ee maxalliga ah; libaax cunto iyo aldi.
Kuwaas waxaa loo diri karaa: 102 N Cedar St. Lumberton, NC 28358
Haddii aad caawin imaan karto, fadlan la soo xiriir cinwaanka emaylka [Email ilaaliyo] or [Email ilaaliyo]
Halyeeyga Lakota, Crazy Horse, mar wuxuu yiri "Aragti aad u weyn ayaa loo baahan yahay ninka lehna waa inuu raacaa madaama gorgorku uu raadinayo daruuraha qoto dheer ee cirka."
Waxaan dhisaynaa koronto inta nalalku maqan yihiin, koronto ka socota gudaha, dusha iyo hoosta kore. Oo annaguna waxaan ku soconnaa himiladeenna xagga buluugga ugu hooseeya ee maalinta iyo gudcurka mugdiga ah ee hareerahaya habeenkii. Waqtiyada masiibada, waxaan rajeyneynaa midba midka kale. Waxaan ognahay haddii masiibo dhacdo, inay waligeed jiri doonto ubax ka soo baxa burburka iyo burburka.
Waxaan kugu casuumeynaa inaad nagu soo biirto.